ल्याङल्याङ: नेपाली समाजमा त्यस्तो युवा पुस्ता कहाँ छ ?
नेपाली समाजमा त्यस्तो युवा पुस्ता कहाँ छ ?
नेपाली समाजमा त्यस्तो युवा पुस्ता कहाँ छ, जसले बजारसत्ता, राज्यसत्ता, पार्टीसत्ता र धर्मसत्तासँग आँखा जुधाउन सक्छ ?
युवा भनेको उमेरको सीमारेखाभित्र बाँधिएको व्यक्ति होइन　। युवा त सधैं अगाडि बढ्न हिम्मत गर्छ　। ऊ निषेधका पर्खाल तोड्ने नायक हो　। ०६२/६३ सालको आन्दोलनताका सबैभन्दा युवा थिए- गिरिजाप्रसाद कोइराला　।
आधुनिक चीनका लेखक ल्यु सुनको एउटा अत्यन्तै मर्मान्त कथन म याद गर्छु
। ल्यु सुन चीनमा चेयरम्यान माओजस्तो अथोरिटीसँग पनि आँखा जुधाउन सक्थे　। उनी चीनका महान्तम लेखक हुन्　। चीनमा क्रान्तिको आँधी उठिरहेको वेलामा युवा पुस्ताका धेरै मानिस ल्यु सुनकहाँ भेटघाटमा गइरहन्थे　। पान्डुलिपि लिएर जान्थे र भन्थे- यसलाई बनाइदिनुपर्‍यो　। ल्यु सुनले कम बनाए भने युवा गुनासो गर्थे- बूढाले हेर्दै हेरेनन्　। ल्यु सुनले अलिकति बढी छाँटकाँट गरे भने गुनासो गर्थे- बूढाले त सखापै पारे　। मानिसहरू गइरहन्थे र गुनासो मात्रै गरिरहन्थे　। ल्यु सुनले एउटा विम्बको निर्माण गरे　। चीनमा यस्तो किंबदन्ती थियो- युवाहरू तन्नेरी काँधमाथि बूढा टाउका बोकेर हिँडिरहेका छन्　।
अहिले मकहाँ धेरै युवा आउँछन्
। महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, कणर्ाली आदि विभिन्न क्षेत्रका युवा आउँछन् र अधिकांशले मबाट जीवनका रेडिमेड उत्तर खोज्छन्　। तिनले गन्गन् मात्रै गर्छन्　। आफ्नो पार्टीका प्रभुसँग जान्छन् र गन्गन् गर्छन्　। कुर्सीको प्रभुसँग गएर पनि गन्गन् गर्छन्　। अहिले गन्गन् गर्ने युवाको संख्या अत्यन्त व्यापक छ　।
साहित्यमा युवा लेखनसम्बन्धी चर्चा हुँदा युवाहरूको महिमामण्डन गर्ने र गुनगान गाउने काम भयो।
त्यो सही हो　। सही किन हो भने भविष्य निर्माण गर्ने आखिर युवाले हो　। देशलाई परिवर्तन गर्ने र देश डोर्‍याउने पनि युवाले नै हो　। तर, यसबारे मेरो प्रश्न छ (उत्तर कसैले दिए पनि हुन्छ, नदिए पनि हुन्छ) - युवाको विम्ब निर्माण गर्न सक्ने युवा कहाँ छन् ? नेपाली समाजमा त्यस्तो युवा पुस्ताको उदय कहाँ भएको छ, जसले बजारसत्तासँग आँखा जुधाउन सक्छ, जसले राज्यसत्तासँग आँखा जुधाउन सक्छ, जसले पार्टीसत्तासँग आँखा जुधाउन सक्छ र जसले धर्मसत्तासँग आँखा जुधाउन सक्छ ?समाज बदल्ने भनेका पार्टीहरू अहिले गुट-उपगुटमा चिरा परेका छन्　। पार्टीमा लागेका अधिकांश युवा गुटको मुख्य मान्छेलाई देउता बनाएर हिँडिरहेका छन्　। कतिपय युवा बजारसत्ताका पैसावाल ख्वामितहरूलाई प्रभु बनाएर उनीहरूकै वरिपरि घुमिरहेका छन्　। आमरूपमा हाम्रा युवाको अवस्था मैले यस्तै देखेको छु　। म बूढो भएको हुनाले मेरो दृष्टि संकीर्ण भयो होला　। मेरो दृष्टि परसम्म पुग्न सकेन होला　। ममा ग्रहणशीलता भएन होला　। तर, मलाई त्यस्तो युवाको विम्ब प्रस्तुत गरिदिनुस्, जसले गर्दा म आफू बूढो भइसकेको महसुस गरूँ !
सभार: नयाँ पत्रिका